Filoha Chávez sy ny “ady anaty akatan-tserasera” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2019 5:12 GMT
Fangon'ny mpidy anaty serasera Communicational Guerrilla logo
Nanangana ny programa antsoina hoe “Communicational Thunder” [kotroka ara-tserasera] ny filoha Venezoeliana Hugo Chávez, mba “hiatrika ny lainga sy ny fandisoam-baovao aelin'ny haino aman-jery tsy miankina”. “Tsy maintsy atao isan'andro ny tolon'ny fampitam-baovao”, hoy izy. Tamin'io andro io, nandritra ny fandaharana isan'Alahady amin'ny fahitalavitra, tanora mpianatra 75 eo anelanelan'ny 13 sy 17 taona no nanao fianianana tamin'ny “Communicational Guerrilla” [ady anaty akatan-tserasera], manao lobaka khaki sy fehi-loha mena mifatotra manodidina ny vozony. Nampiofanina izy ireo mba “hiady amin'ny hafatra imperialista”, na amin'ny tambajotra sosialy an-tserasera, na amin'ny rindrina sy ny bokikely na “amin'ny alalan'ny fidirana an-tsehatra mivantana”.
Milaza ny solotenan'ny governemanta fa hetsika milamina izany. Nilaza ny Minisitry ny Fampianarana eny amin'ny Oniversite, Edgardo Ramírez fa ny mpiady anaty serasera dia mikendry ny hiady amin'ny “fampihorohoroana amin'ny fampitam-baovao”. Nanambara ihany koa ny minisitry ny fampianarana, Héctor Navarro, fa ny anarana “ady anaty akata” dia nosafidiana noho ny dikany ho amin'ny fikaretsahana, fizakantena sy fahaiza-manao, ary “antenaina” fa ho foto-kevitra ihany ny tifitifitra avy amin'ny mpiady anaty akata. Na izany aza, roa andro taorian'izay, nanao fianianana tamin'ireo lehilahy sy vehivavy maherin'ny 30.000 tamin'izay nantsoiny hoe “andron'ny vahoaka mitam-piadiana“, tsingerintaonan'ny fanonganam-panjakana taona 2002 ny Filoha Chavez. “Tsy afaka mamela ny bourgeoisie hibodo toerana ao anatin'ny Antenimieram-pirenena isika.” hoy izy, milaza momba ny fifidianana parlemantatera ho avy amin'ny volana novambra.
Lehilahy sy vehivavy 30.000 no nianiana sy nahazo fitaovam-piadiana tamin'ny “andron'ny vahoaka mitam-piadiana”
Nivoaka ampahibemaso nanohitra ity hetsika ity ireo solotenan'ny mpanohitra, tsy noho ny anarana, ny fanamiana ary ny semantika [hevitryny teny] ihany, fa noho ny filoha Chàvez izay efa nilaza teo aloha fa manohitra ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook sy Twitter, ary nitsikera fa nampiasaina ho fitaovana ho an'ny mpanohitra ireo mba hampielezana hafatra imperialisma, ary niantso ny mpanaraka azy mba hanao valim-panafihana. “Tahaka ny hoe manana basy sy tafondro izy ireo, mihazakazaka ao amin'ny aterineto amin'izay tsy fantatro hoe pejy sy bilaogy firy (..), Blackberry sy Twitter ary ny sisa, sy ny firaisana tsikombakomba misy ankehitriny. ) Jereo, fa ny aterineto mihitsy no nanao fanonganam-panjakana. ” hoy izy. Ireo izay manohitra azy, dia toa sahiran-tsaina amin'ny mety ho fiantraikany amin'ireo tanora fanahy antsoina hoe “mpiady anaty akata”, sy ny lanjany ara-semantika, ara-politika sy ara-miaramila amin'izany teny izany, ary ny mety ho fihetsik'izy ireo eo amin'ny sehatra ara-politika iray (ohatra, ny fifidianana ho avy).
Na izany aza, tsy hevi-baovao eo amin'ny fampitam-baovao ny “ady anaty akatan-tserasera”, satria efa nampiasaina taloha izany mba hanondroana ny endrika fifandraisana tsy ofisialy sy tsy ifanarahana, toy ny graffiti sy ny tantara tsangana an-dalambe ary ny hacktivisma. Mety izao no fotoana mety hahatsiarovana fa ny hacktivisma dia ahitana endrika maro amin'ny fampiasana fitaovana nomerika, tsy ara-dalàna ny sasany amin'izy ireo, toy ny fangalarana vaovao sy ny fanafihana fandàvana ny servisy, izay toa miankina amin'ny ideolojian'ny vondrona mampiasa io karazam-pifandraisana io. Noho izany, mety ho sarotra ny maminavina dieny izao ny hetsika ho ataon'ny vondrona. Na izany aza, nanjary toeram-pihaonana vaovao ifanajana sy kianja ifandonana eo amin'ireo hery politika ao Venezoelà izany.
Sary fangon'ny Communicational Guerrilla: Ny bilaogin'izy ireo.
Sary avy amin'ny elpais.com.